Maxamed Juxa | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Talooyinkaan iyo xikmadahaan ayaa ah xikmado iyo talooyin lasoo arruuriyay. Waxayna si toos ah ugu turjubanayaan waayo aragnimada nolosha iyo waxwalbo oo anfici karo bulshada, haddii ay noqoto arrimaha la xariira qoyska iyo caqabadaha kusoo wajahi karo maalin walbo iyo kuwa la filani karo mustaqbalka. Ha oran hebel nama yaqaan wakhtiga danta uu leeyahay maahane, ee waxaad dhahdaa waxaa mahadleh Allhii igu karaameeyey inaan dadka dantooda u fuliyo, waayo waxaa jira Xaddiis dhahaya “Dadka Alle agtiisa loogu jecel yahay waa dadka ugu anfac badan “. Sababaha sacaadada ayaa waxaa ka mid ah inaad leedahahay indha aad ku aragto waxyaabaha …
Inaan kobcino garaadnimada waa wax aad u wanaagsan, balse hadana bini’aadamka garaadnimada waxay u helaan siyaabo badan oo kala duwan sidda kuwa ku dhashay ama kuwa kala yimid xagga qoysaskooda. Qoraan kooban waa erayo la soo aruuriyay oo tilmaamayo waayo aragnimada iyo wacaygelinta muhiimka u ah bulshada. Waxaa isu yimid wadaad yahuudi ah iyo wadaad masiixi ah ah, markaasi ayaa waxay yiraahdeen aan u cid dirno Imaam Maxamed Cabdoo oo Masri ah si loo weydiiyo cidda jannada galaysa yahuudda ama masiixiyiinta ama muslimiinta ? Imaamka jawaabtiisa ayaa waxa ay ahayd mid aad u qurux badan, ugana jawaabay si aadaab iyo …
Qoraalkaan ayaa ah qoraallo xikmadeysan oo taxane ah. Waxaan jeclahay inay jiraan dad badan oo ka faa’idaysatay. Bulshada marwalbo waa inay leedahay cid u fakirto oo ka naxdo danahooda iyo siddii ay isbedel u sameyni lahayd. TukeSomalism marwalbo waxay ku hawl jirtaa siddii ay bulshadeeda u horre marini lahayd iyadoo loo isticmaalaayo qoraaladda xikmadeysan oo lagu bixiyay waqtiga iyo garaad aan loo kala harin. Qoraalkaan hoose waxaad ka dheehani kartaa xikmado iyo waxyaabo badan oo muhiim u ah noloshaada inaad barato, hadaba ka bogasho wacan. Qalbiyada asliga ah oo wax u jeclaada si naqi ah waxaad dareemaysaa in aad …
Waayo aragnimada waa shey qaali ah oo hadana muhiim ah. Cidwalbana waayo arag iyo xikmadle ma noqdo. Qofka marka uu la kulmo waayo aragnimo dheeri ah wuu ka duwanyahay dadka intiisa kale. Waxaana laga dareemaa hab-dhaqanka qofka. Hadaba qoraallkaan soo socda waa xikmado iyo tallooyin wax ku ool leh. Nooloow keligaa, hayeeshee cidna kelinimo ha badin. u nooloow si qof weyn ee haku noolaan islaweyni, Alle u nooloow Dartiisana u dhimo, abuurkana Abuurahooda u daa…Xigasho Axmed Diidaat AUN.. Quwadda goorwalba maaha waxaan dhahno iyo waxaan sameyno mararka qaar, waxa ay noqotaa waxa aan ka aamusno, waxaan uga tagno rabitaankeena iyo …
Fahanka nolosha guud waxay u baahantahay inaad fahanto aragtida ku salaysan waa maxay nolosha guud? aadanaha marwalbo waxaa la soo deriso dhibaatooyin badan iyo qalallaad ka dhaca. Waxaa macquul ah inaad leedahay saaxibo wanaagsan oo aad kala tashanayso dhibaatadaada haddii ay kula soo derisaan dhibaatooyinka soo wajaha nolol maalmeedkaada. Inaad saaxiib yeelato, wali mid aad ku kalsoontahay waa muhiim, waxayna ku dhexelsiisaa inaad horumar ka sameyso xagga go’aan qaadashada. Hadana Halkaan waxaad ka helaysaa xikmado iyo talooyin kobcini kara garaadka dadnimadaada. Sacaada ayaa la weydiiyey goormee timaadaa ? Waxay tiri : waxaan imaadaa marka ay nafsaddu garato inuusan ku dhacaynin …
Dhaqan, Af, iyo Taariikhda DuniddaQoyska & Horumarinta Bulshada
Iskuday inaad waqti cayiman siiso qoraalkaan nuxurka iyo qaayaha ku fadhiya. Qoraalkaan wuxuu xambaarsanyahay macnaha guud ee waayo aragnimada nolosha aadanaha, waxaana jeclahay inaad wax badan ka barani doonto haddii aad u fiirsato erayada ku dheexan qoraalkaan. Aqristoow waxaan kaa rajeynayaa inaad si fiican ugu faa’ideysato. Hadaba aqris wacan. Cilaaqada ama xiriirka kaliya aan marnaba xumaanin, fashilmin, khalkhal gelin, niyado xun la soo dersin iyo malooyin ayaa waxa ay tahay cilaaqada qofka ay kala dhexeyso Rabbigiisa, dariiqooyinka ugu daahirsan lagu joogtayn karo xiriirkaasi ayaa waxa uu yahay salaadda… Shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda maaha inaad ku hadaaqdo hadalo liita ama …
Ha oran hebel nama yaqaan wakhtiga danta uu leeyahay maahane, ee waxaad dhahdaa waxaa mahadleh Allihii igu karaameeyey inaan dadka dantooda u fuliyo, waayo waxaa jira Xaddiis dhahaya “Dadka Alle agtiisa loogu jecel yahay waa dadka ugu anfac badan “. Sababaha sacaadada ayaa waxaa ka mid ah inaad leedahahay indha aad ku aragto waxyaabaha qurxoon, qalbi cafiya waxa ugu xun, caqli ka fekera waxa ugu wanaagsan, iyo ruux ka buuxa rajooyin. hayeeshee haddii ay indhahaagu qabtaan kaliya waxa fool xun iyo liita sida, oo marwalba ku fekerta aargoosi hadal ahaan ama ficil ahaan, ruuxaagana uu ka buuxsamo rajabeelo, markaasi …
Qof walba oo insaanka ka mid ah waxa uu leeyahay mowhibooyin isaga u gaar, iyo karti uu dadka kale kaga duwan yahay, sababta oo ah Ilaahay qof walba waxa uu ku abuuray waxyaaba isaga u khaas ah si uu markaasi ugu fuliyo ujeeddooyinka ruuxiisa, naftiisa, noloshiisa, iyo shakhsiyaddiisa, hayeeshee muhiimadda ugu weyn ayaa waxa ay tahay in qofka uu daaha ka qaado mowhibada iyo kartida uu leeyahay uu Alle ku abuuray oo uu gudahiisa ka dhex raadiyo oo uu helo si markaasi u garto kartidisa waxa ay tahay iyo mowhibadiisa si uu markaasi ugu faa’iideeyo naftiisa, dadkiisa, diintiisa dalkiisa iyo ummaddiisa. …
Nolosha bani aadamka waxaa jira waxyaaba aad muhiim u ah oo markaasi qofka laga doonayo inuu diiraddaa saaro, kuna dadaalo inuu ka faa’iideysto gaar ahaan waxyaabaha muhiimka ah oo maraaskina asaasi u ah qofka naftiisa iyo noloshiisa,kuwaasi oo markaaasi noqon kara waajibaad saaran oo markaasi laga doonayo in sida ay tahay loo guto. Rasuulkeena SCW waxa uu noola dardaarmay waxyaaba aad u badan markaasi bilaya nolosheena haddii aan ku dhaqaaqno, waxyaabaha uu nala dardaarmay waxaa ka mid ah shan arrimood oo markaasi muhiim ah in qofka ilgooni ah uu ku eego isla markaasi haddii uu sameeyo uu faa’iido badan iyo …
Ma jirtaa qof noloshiisa ku nool cabsi la’aan iyo filasha la’aan waxa imaanaya? Qofka dhadhamiya dhadhanka nicmada waxa uu ka baqaa in nicmadaasi ka tagto, qofka la nool dadka uu jecel yahay waxa uu ka baqaa in maalin uun uu waayayo dadkaasi uu jecel yahay oo uu keligiisa noolaado, waxaan ka baqnaa in aan gabowno oo tabar la’aan nagu dhacdo, waxaan ka baqnaa arsaaqaddeena, waxaan ka baqnaa in qalbiyadeena ay dhaawacaan dad aan jecel nahay, waxaan ka baqnaa in aan keligeena noolaano. Cabsida badanaa maaha wax khalad ah, cabsida waa dareen ku beeran gudaheena kana mid ah fidra nalagu abuuray …